XILDHIBAN FIQI:-XARAASHKA XIRMOOYINKA SHIDAALKA SOOMAALIYA. | Wardoon
Home Somali News XILDHIBAN FIQI:-XARAASHKA XIRMOOYINKA SHIDAALKA SOOMAALIYA.
XILDHIBAN FIQI:-XARAASHKA XIRMOOYINKA SHIDAALKA SOOMAALIYA.
Shirka London 07 Febraayo ka dhacaya ee ajendahiisu yahay xaraashka xirmooyinka ka mid ah shidaalka Soomaaliya, waxaa hareeyey mugdi weyn, waxaana jirta oo uusan shirkaas u noqonayn xalaal ama sharci:
1. Shuruucdii kala duwanayd iyo hey’adihii maamuli lahaa khayraadka shidaalka Soomaaliya oo aanba jirin.
2. Waxaa umadda Soomaaliyeed u kala caddaan la’, Xukuumadda Soomaaliya iyo shirkadda ugu weyn kuwa xaraashka loo samaynayo ee SOMA OIL & GAS, oo la tuhunsan yahay in raysulwasaaruhu saxiixii dawladda Somalia iyo milkiyaddii Shirkadaas uu asagu wada leeyahay (confilct of interst).
3. Waxaa muuqata in kooxda mashruucaan ku lugta leh aysan wax tixgalin ah siinayn codka dadka Soomaaliyeed ee dalbanaya in la joojiyo xaraashka, iyo in shidaalka dalka oo ah khayraad umadda ka dhexeeya iaan si mugdi ah loo maamulin ama si gaar ah oo dano qarsoon ah la isaga maamulanin.
Sidaas awgeed, waxaan taageerayaa wadaniyiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka UK iyo dalalka kale ee Yurub ee go’aansaday in maalinta khamiista 07 Febraayo la muujiyo dareenka dadka Soomaaliyeed ayagoo qabanaya banaanbax lagu diidayo in si raqiis ah oo sharci-darro ah ay dalaaliin danley ah ay isku dayaan in xaraash ay galiyaan xirmooyin ka mid shidaalka Soomaaliya. waxaan madaxda villa Somalia ee daaha gadaashiisa ka maamulaysa shirkaas ugu baaqaynaa in ay joojiyaan shirkaas, oo ay gartaan in la isku fahmay arrinta, ayna tixgaliyaan baaqyada ka soo baxaya dadka Soomaaliyeed.
Waxaan codkayga ku biirinayaa in banaanbaxaas lagu badbaadinayo khayraadka dalkeena laga wada qeybgalo, waxaana mas’uuliyad gaar ahi saaran tahay maaliyadda weyn ee London ku dhaqan.
Previous articleAqalka sare oo kahor yimid shirka lagu Xaraashayo shidaalka Somalia (Akhriso)
Next articleXasan Sheekh oo lakulmay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif +SAWIRRO
Qaramada Midoobay oo dacwad kusoo oogtay Cali Geedi
Xildhibaan JINDI: “Farmaajo si cad ayuu uga aamusay musiibadii ka dhacdey...